यायोक्खा अध्यक्षमा तीन जनाको दाबी : नेकपा, फोरम र काङ्रेसको भिडन्त ! «
यायोक्खा अध्यक्षमा तीन जनाको दाबी : नेकपा, फोरम र काङ्रेसको भिडन्त !
प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७५, सोमबार ११:५४
धरान- किरात राई यायोक्खाको अध्यक्षमा तीन जनाले दाबी गरेका छन् । यायोक्खाका उपाध्यक्ष दिवस राई, अर्का उपाध्यक्ष गेन राई र महासचिव जीवन हाताचोले दाबी गरेका हुन् । शनिबारदेखि सुरु भएको यायोक्खाको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन धरानमा भइरहेको यस माहाधिबेशनमा अध्यक्षमा तीन जनाको दाबी उम्मेद्वार नेकपा,सङ्घिय फोरम र काङ्रेसको पार्टी निकट हुन । को अध्यक्ष भन्ने कोठे बहस अहिले नै शुरु भएको चर्चा छ ! कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु बन्दसत्र र सम्मेलन सफल पार्न सक्रिय भइरहेको बेला विभिन्न राजनीतिक संगठनमा आवद्ध प्रतिनिधिहरु बहस र छलफल गर्दै छन । यायोक्खा एक बिशुद्धा सामाजिक सस्था हो ।
अध्यक्षमा तीन जनाको दाबीहरु कस्तो छन ?
यायोक्खाको अबको अध्यक्षको रुपमा दिवस राई बलियो उम्मेदवार हुन् । किरात राई विद्यार्थी संघबाट सामुदायिक राजनीति शुरु गरेका दिवस संघको अध्यक्ष तथा यायोक्खाको महासचिव हुँदै वर्तमान कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष बन्न पुगेका हुन् । नेकपानिकट उनले यायोक्खाको कार्यबाहक अध्यक्ष भएर समेत काम गरे । तर उनी सरकारी कर्मचारीसमेत हुन् । उनी हाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा अधिकृतको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
किरात राई समुदाय हितमा मरिमेटेर काम गर्दै आएका गेन राईलाई संघीय समाजवादी फोरम निकट मानिएको छ । यायोक्खा र राई समुदायमा उनको योगदान प्रशंसनीय छ । उनी कुनै पेसा वा जागिर खनाई यायोक्खा तथा सामाजिक कार्यमै व्यस्त हुँदै आएका छन् । गेन गत स्थानीय निर्वाचनमा लिम्चिमबुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षका उमेद्वार थिए । उनि सके यसपालि, नसके अर्को पाली अध्यक्षको लागी भन्ने एक निकट स्रोतले बताए ।
जीवन हाताचो राई नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशिल उनी यायोक्खा तथा सामाजिक कार्यमा निकै सक्रिय रहँदै आएका छन् । जीवन पनि वर्तमान अध्यक्षको पेलानको कारण मात्र अघि बढेको बुझिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष तिलक कांग्रेस निकट र जीवन पनि कांग्रेस निकट भएकोले जसरी पनि अध्यक्षमा दाबी नछोड्न उनलाई दबाब परेको सम्मेलन स्थलामा चर्चा छ । उनको पनि यसपाली अध्यक्षमा उम्मेद्वार दिएर उपाध्यक्ष बनी आउदो पटक अध्यक्ष लिने दाउ रहेको बुझिएको छ ।
महासचिबमा तीन जनाको दाबी
यायोक्खाको नयाँ नेतृत्वको महासचिवमा पनि तीन जनाले नै दाबी गरेका छन् ।
उपमहासचिव जनक राई, भिम राई र केन्द्रीय सदस्य धिरेन्द्र रुम्दालीले दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । भिम राई नेकपानिकट हुन् भने रुम्दाली संघीय फोरम निकट हुन् । जनक राई संघीय फोरमको राजनीतिक एजेण्डासँग नजिक रहे पनि उनी खुलेर पार्टीमा लागेको देखिएको छैन ।